“पाँचतारे होटलमा ,भव्य ‘बेबी सावर’: छोरीलाई स्वागत गर्न आतुर ‘आयंका’ जोडी ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“पाँचतारे होटलमा ,भव्य ‘बेबी सावर’: छोरीलाई स्वागत गर्न आतुर ‘आयंका’ जोडी !
“कुनै पनि नारीले आफूलाई तबमात्र पूर्ण भएको महसुस गर्छे, जब ऊ आमा बन्छे । यसैले त आमा बन्ने कुरा सबै महिलाको लागि जीवनको ठूलो खुसी हो ।”
“अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले पनि अहिले आमा बन्न लाग्दाको खुसी महशुस गरिरहेकी छन् । जुन उनले साझा गरेका तस्बिरहरूबाट पनि झल्किन्छ । अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग अघिल्लो वर्ष धुमधामसँग विवाह गरेकी उनी आफ्नो पहिलो सन्तानलाई जन्म दिन आतुर छिन् ।”
“आफू गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक गरेपछि प्रियंकाले दिनहुँ आफ्नो बेबी बम्पसहितका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेकी छन् । केही समयअगाडि उनले आफू र आफ्नो पेटमा बच्चाको आकार बनाएर गर्भको भ्रूणलाई पाइपबाट जुस पलाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेपछि निकै भाइरल भएको थियो । यो तस्विरका कारण उनको आलोचना पनि निकै भएको थियो ।”
“अहिले प्रियंका साथी र परिवारले आयोजना गरेको ‘बेबी सावर’ मा रमाइरहेकी छन् । गएको हप्ता उनका नजिकका साथीहरुले मिलेर ‘बेबी सावर’ आयोजना गरेका थिए । शनिवार आयुष्मानले पनि प्रियंकाको लागि काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा ‘बेबी सावर’ पार्टीको आयोजना गरे । जसमा दुवै पक्षका परिवारका सदस्यदेखि नजिकका व्यक्तिहरुको उल्लेख उपस्थिति रहेको थियो ।”
आइतवार प्रियंकाले इन्स्टामा उत्कृष्ट ‘बेबी सावर’ को आयोजना गरेकोमा श्रीमानलाई धन्यवाद दिँदै यो आफूहरुका लागि सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहेको बताएकी छन् ।
Previous “पुजा’को ‘आ’क्रोश’: ‘ओइ चुप’प्रकाश सुवेदी’
Next हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’कि चम्सुरी(पल्पसा डंगोल) को दुबै मृ’गौंला फे’ल,अहिले उपचार हुँदै, शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना!